Xubnaha ASOJ oo socdaalkoodii ugu dheeraa ku maraya baaskiilo dalka Uganda , Daawo sawirada.
Monday July 05, 2010 - 04:38:43 in Warar Af-Soomaali ah by Super Admin
Wafdi ka socda Ururka Isu taga Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ASOJ ayaa ka degay garoonka Caalamigaa Entebbe Uganda kadib markii ay laba maalmood ku sugnaayeen Magaaladda Capetown ee dalka koofur Afrika oo ay kaga qaybgaleen shirar heer Caalamiya oo ay ku kulmayeen Saxaafadda madaxabanaan ee dalalka Afrika iyo Barrigga dhexe.
Wafdigga oo uu horkacayo Gudoomiyaha ASOJ Dahir Abdulle Alasow ayay u bilaabatay booqashooyin ay ku marayaan goboladda Dalka Uganda ,waxayna socdaalkoodii ugu horeeyay baaskiilo ku mareen dhul dhan 140 Km .
Wafdiga oo gaaray Jinja gelinkii dambe ,waxay booqdeen degaano dalxiiska loo tago sida Wabigga NIIL ee degaanka Jinja ka mara dalka Uganda.iyagoo sidoo kalana baaskiilo ku maray degaanada Makoono,Jinja,,Iganga,buguri,,Ngywarere,busteema.
Xubnaha ASOJ oo lagu wado inay kulan la yeeshaan Ururka Suxufiyiinta Dalka Uganda waxay dalxiiskooda sii wada doonaan laba maalmood kadibna waxaa ay Kampala kaga qaybgeli doonaan shir Caalamiya oo looga hadlayo Halista Cudurka Aids-ka iyo doorka ay ka qaadan karto Warbaahinta dhinaca wacyigelinta bulshadda.
Ergada sare ee Ururka Isu taga Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ASOJ waxaa socdaalkooda ku wehliyo Wariyaal ajnabiya oo ka socda Ururka Wariyaasha aan xaduudka lahayn ee RSF.
Dalxiiska xubnaha ka socda ASOJ iyo RSF ayaa ku beegan xilli ay dalka Uganda ka da'ayaan roobab ma hiigaana oo degaankaas ka dhigay doog,waloow Wariyaal Ugandheysa oo la socda wafdiga ay u sheegeen in Uganda lahayn Abaar iyo Aaran oo had iyo jeer Barwaaqo tahay .
Wafdiga ASOJ oo ka kooban todobo xubnood waxaa lagu wadaa inay Kampala kaga sii gudbaan Caasimadda Dalka Najeeriya ee Legos si ay isu arkaan madaxda Ururka Suxufiyiinta Nayjeeriya ee NAJ.
Si kastaba ha ahaatee socdaalka wafdigga ASOJ ee dalalka Afrika ayaa noqonaya mid lagu xoojinayo xiriirka Saxaafiyiinta Soomaaliya ee Warfidiyeenadda Afrikadda kale.